चितवनमा संक्रमित संख्या ६ पुग्यो, देशभर ५ सय ४८ जना
By administrator on	 May 23, 2020 कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय
भरतपुर १०, जेठ । चितवनमा आज (शनिबार) थप एक जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भरतपुर कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.६ केशरबागका ५२ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित पुरुष हिजो पुष्टि भएका ७४ वर्षीय पुरुष र ७३ वर्षीया महिलाका जेठो छोरा हुन् । तीनै जना जेठ ३ गते भारतको दिल्लीस्थित राजीव गान्धी हस्पिटलबाट फर्किएका थिए ।
दोस्रो पटक परिक्षण
५२ वर्षिय छोरामा यस अघि गरिएको परिक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिएको थिएन । बुवा आमाको परिक्षण गर्दा उहाँको पनि परिक्षण गरिएको थियो । कोरोना नदेखिएपनि आइसोलेसनमा राखिएको थियो । अहिले पुनः परिक्षण गर्दा कोरोना देखिएको भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
चितवनमा ६ जनामा कोरोना संक्रमण
यस संगै चितवनमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ पुगेको छ । राप्ती नगरपालिकाका दुई जना उपचार पछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने, बाँकी ४ जनाको उपचार जारी रहेको छ ।
शनिबार ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
आज मात्रै थप ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कपिलवस्तु, सर्लाही, रुपन्देही, काठमाडौंलगायतका जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन् । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ५ सय ४८ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्लाहीको गोडैता र कविलासी नगरपालिकामा १३ जना संक्रमित भेटिएका छन् । त्यस्तै कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा ८ जना संक्रमित भेटिएका छन् । रुपन्देहीमा ८ जना, बारा, चितवन र काठमाडौं जिल्लामा पनि एक एक जना संक्रमित भेटिएका मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।